Ukunxiba nokulala kwisilika kunezibonelelo ezimbalwa ezongezelelekileyo eziluncedo emzimbeni nasempilweni yolusu lwakho. Uninzi lwezi zibonelelo luvela kwinto yokuba isilika yintambo yesilwanyana yendalo kwaye ke iqulethe iiamino acid eziyimfuneko emzimbeni womntu ngeenjongo ezahlukeneyo ezinje ngokulungiswa kwesikhumba kunye nokuvuselelwa kweenwele. Kuba isilika yenziwa ziintshulube zesilika ukuzikhusela kwingozi yangaphandle ngexesha lesikoko, ikwanakho nobuchule bendalo bokukhupha izinto ezingafunekiyo ezinje ngebhaktiriya, umngundo nezinye izinambuzane, nto leyo iyenza ibe yi-hypo-allergenic ngokwendalo.
Ukhathalelo lolusu kunye nokukhuthaza ukulala
Isilika ye-mulberry emsulwa yenziwe ngeprotein yezilwanyana enee-amino acid ezili-18, ezaziwayo ngokusebenza kwazo kulusu lokondla kunye nokuthintela ukuguga. Okona kubaluleke kakhulu, i-amino acid iyakwazi ukunika into ethile ekhethekileyo eyenza abantu babe noxolo nokuzola, ukukhuthaza ukulala ubusuku bonke.
Ukufunxa ukufuma kunye nokuphefumla
I-silika-fibroin ekwimisundu iyakwazi ukufunxa kwaye ihambise ukubila okanye ukufuma, ikugcine upholile ehlotyeni kwaye ufudumele ebusika, ngakumbi kwabo banesifo se-allergenic, i-eczema kunye nabo bahlala ebhedini ixesha elide. Kungenxa yoko le nto iidermatologists kunye noogqirha besoloko becebisa ukuba kwenziwe isilika kwizigulana zabo.
I-anti-bacterial kwaye ngokumangalisayo ithambile kwaye igudile
Ngokungafaniyo namanye amalaphu ekhemikhali, isilika lolona fayibha wendalo luthathwe kumbungu wesilika, kwaye iiweave zomelele ngakumbi kunamanye amalaphu. I-sericin equlethwe kwisilika ithintela uhlaselo lwezibungu kunye nothuli ngokufanelekileyo. Ukongeza, isilika inesakhiwo esifanayo solusu lomntu, esenza imveliso yesilika ithambe ngokumangalisayo kwaye ichasane nokungami.